DEG DEG:- Madaxweyne Kuxigeenka Dowladda Puntland si deg deg u gaaray deegaan….. – Shabakadda Puntland FM
You are here: Home WARARKA MAANTA DEG DEG:- Madaxweyne Kuxigeenka Dowladda Puntland si deg deg u gaaray deegaan…..
DEG DEG:- Madaxweyne Kuxigeenka Dowladda Puntland si deg deg u gaaray deegaan…..
Madaxweyne kuxigeenka dawladda Puntland ENg Cabdi Xakiim Xaaji Cumar
Camey oo ayaa kormeer ku tagey goobihii uu shalay saameeyey dab ka dhacay bartamaha magaalada Garoowe & Isbitaalada oo la dhigay dhaawacyadii dabkaasi ka dhashay.
Madaxweyne kuxigeenka Puntland ayaa booqashada uu ku tagey Isbitaalada wuxuu ku soo arkay qaar kamid ah dhaawacyadii uu Alle uga baryey in uu caafimaad taam ah siiyo, wuxuuna u muujiyey sida dawladdu uga xun tahay waxa dhacay.
Eng, Camey wuxuu kaloo booqday goobihii uu ka dhashay dabkan, wuxuuna sheegay in dawladdu ay go’aamo ka soo saari doonto waxyaabaha dabkan kiciyey iyo sidda loogu baahan yahay in kaalimaha Shidaalka iyo ganacsiga kale la kala saaro.
Madaxweyne kuxigeenka ayaa cadeeyey in ay dawladdu ku howlahan diyaarinta qorshahaas oo ay hadda si deg deg ah gacanta ugu hayaan, ayna waajib tahay in masuuliyad la muujiyo xiliyada laga
ganacsanayo Shidaalka oo ah waxyaabaha dadajiyo fiditaanka dabka.
Ilaa hadda 2 qof ayaa dhimatay, tiro intaasi ka badan wey ku dhaawacmeen dabkii shalay galab ka
kacay bartamaha caasumada Puntland, waxaana gubtay kaalimo Shidaal iyo goobo lagu Shaaho oo ku dhawaa, kuwaas oo ay lahaayeen ganacsatada deegaanka.
Dawladda Hoose ayaa lagu eedaynayaa in ay gabtay shaqadeedii oo aysan geynin Dab-damisyada ay u baahan tahay magaaladan oo ilaa hadda uusan jirin wax weyn oo laga qabtay, laakiin lagu baraarugey markii ay dhacday musiibadan.